Lithini isicwangciso-qhinga sexabiso kunye neengcebiso ezithile | Ezezimali
Ngenani elikhulu kangaka leenkampani kunye namashishini asebenza kwihlabathi namhlanje, ukhuphiswano luye lwaba lukhulu kakhulu kwaye lucelomngeni kunanini na ixesha. Nangona kunjalo, esi ayisosithintelo ekungaqali nasekwakheni amashishini amatsha afuna indawo kwiimfuno zokusebenzisa zabemi behlabathi.
Kule meko, enye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka zilawulwe ukwenza nayiphi na iprojekthi yohlobo lweshishini yinto eyaziwa ngokuba yi Ikhonkco yexabiso.
1 Yintoni uluhlu lwexabiso?
2 Lisebenza njani ikhonkco lexabiso ngaphakathi kokusebenza kwenkampani?
3 Ngaba inzuzo yokukhuphisana yenye inkampani iveliswe ngaphezulu kwenye?
3.1 Xabisa imisebenzi
3.2 Imisebenzi ephambili
3.3 Imisebenzi yokuxhasa okanye yesibini
4 Iingcebiso zokusebenzisa ngempumelelo ikhonkco lamaxabiso
Yintoni uluhlu lwexabiso?
Ityathanga lexabiso linesixhobo esiliqili esisetyenziselwa ukufundisisa imisebenzi eyahlukeneyo eyenziwayo neyenziwa ngumbutho othile wezoshishinol, oku ukuze imithombo yayo yokhuphiswano ifumaneke kwaye ngale ndlela, ikwazi ukuvelisa ixabiso elithile kwimveliso yokugqibela.
Ngale ndlela, sinokufumanisa ukuba Ikhonkco lexabiso lenkampani lenziwa ngayo yonke imisebenzi eyenziweyo equka ixabiso elongeziweyo.okanye, kunye nangaselunxwemeni ukuba le misebenzi inokuba negalelo. Isishwankathelo, ikhonkco lexabiso lenziwe yimisebenzi yeqhinga efuna ukwandisa ixabiso kunye nokhuphiswano kwishishini.
Lisebenza njani ikhonkco lexabiso ngaphakathi kokusebenza kwenkampani?
Ixabiso elenziwa ngenxa yemisebenzi yeshishini lisebenza ngolu hlobo lulandelayoKwimeko yeemveliso zokwenza imveliso, zivelisa ixabiso xa ziguqula izinto ezingavuthiweyo zibe yimveliso eziyimfuneko kubemi.
Ewe, ixabiso elongeziweyo sele lifunyenwe kwimveliso yokugqibela eyenziweyo, kuba izinto ezingasetyenziswanga ezingasetyenziswanga azisebenzeli abantu ukuba zisetyenziswe imihla ngemihla.
Ngesi sizathu, inkampani yokuthengisa inikezela inani elikhulu leemveliso eziqulathe ixabiso elongeziweyo njengoko sele zilungisiwe, ixabiso elonyukayo ngokunika zonke ezi zinto kumthengi kwindawo enye, indawo ebonelelwe ukusekwa kwentengiso ukuze abantu bafumane yonke into abayifunayo, okubandakanya iindleko ezongezelelekileyo ezinexabiso elongezelelweyo kwimveliso yokugqibela, kwaye umthengi aya kuthi ekugqibeleni abhatale kuyo ukuze aqhubeke nokufumana iimfuno zabo ezisisiseko, ngokusebenzisa amanqaku sele kusetyenzwe nakwindawo enye yokuthengisa.
Ngaba inzuzo yokukhuphisana yenye inkampani iveliswe ngaphezulu kwenye?
Uncedo lokhuphiswano lwenkampani enye ngokunxulumene nenye lwenziwa xa umntu ekwazi ukwandisa umda wayo, enokuthi ifezekiswe ngokunciphisa iindleko, okanye nangokwandisa ukuthengisa. Umda yinto eyaziwa ngokuba ngumahluko owenziwe phakathi kwexabiso elipheleleyo kunye neendleko zokudibanisa nokwenza imisebenzi yexabiso lombutho weshishini.
Ukwenza umsebenzi wayo, Ityathanga lexabiso linemisebenzi yenkxaso esisiseko, enokwahlulahlulwa ibe ngamacandelo amabini aphambili: imisebenzi ephambili kunye nemisebenzi yesibini. Okulandelayo, siza kujonga ezona mpawu ziphambili ekuhlanganiseni nganye yezi ndlela zokunyusa ukhuphiswano, kwaye ngenxa yoko, ixabiso elongeziweyo lenkampani.
Eyona misebenzi iphambili yenziwe ziindlela zokwenziwa kweemveliso ezibonakalayo, kunye nenkqubo yazo yokuthengisa kunye nenkonzo yasemva kwentengiso ebandakanya loo msebenzi.. Kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba ezi zinto, zinokuhlulwa zibe yimisetyenzana. Ngokuyintloko, kwimodeli yetyathanga lexabiso, iintlobo ezintlanu zemisebenzi ephambili zinokwahlula ngokucacileyo, ezi zilandelayo:
Ukulungiselela kwangaphakathi: Yiseti yemisebenzi yokwamkelwa, ukugcinwa kunye nokuhanjiswa kwezinto zokwenza imveliso, ebaluleke kakhulu ekuqinisekiseni ukuba akukho ziphazamiso okanye iziphelo zalo naluphi na uhlobo ezenziwayo ezichaphazela imveliso okanye ulungelelwaniso lwalo naliphi na iqumrhu lorhwebo.
Ukusebenza: Nje ukuba izinto ezingafunekiyo zifumaneke, lo msebenzi ubhekisa kumandla okuqhubekeka kwezi zinto ukuze uzitshintshe zibe yimveliso yokugqibela. Ke ngoko, linyathelo elibalulekileyo lokuqinisekisa imveliso eliza kuba nayo ishishini.
Izinto zokusebenza zangaphandle: Ukuba ulungiselelo lwangaphakathi lubhekisa kuhambo lokuqinisekisa ukuphatha kunye nokugcinwa kwezinto ezingafunekiyo ekuveliswe ngazo imveliso yokugqibela, ulungiselelo lwangaphandle, kwelinye icala, lunento yokwenza nale ndlela inye, kodwa isetyenziswa kwiinkqubo zangaphandle, oko kukuthi, xa imveliso ishiya iziko lemveliso kwaye isiwe kubathengisi, abasasazi okanye nasekupheliseni abathengi.
Ukuthengisa kunye nokuthengisa: Lo msebenzi, njengoko igama lawo linokubonisa, ubalulekile kwimveliso yokwaziswa kubathengi.
Inkonzo: Lo msebenzi unokudityaniswa zombini kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa kunye nayo yonke into enxulumene nolwazi kunye nokugcinwa okunokubandakanya ukuthengwa kwemveliso. Imalunga nokuqinisekisa ukunyaniseka kwabathengi ngokubabonelela ngemveliso esele isezandleni zabo ibandakanya iziqinisekiso ezithile ezibalulekileyo, ezinje ngokuqinisekisa imbuyekezo kwimeko yomonakalo okanye ukungafezeki, okanye ukubonelelwa ngeengcebiso ngokuchasene nesiphelo esinje ngokusilela kunikezelo okanye Inkxaso yokufaka imveliso, njl. Zonke ezi ziqinisekiso zenzelwe ukugcina kunye nokunyusa ixabiso lokugqibela lemveliso, ngaloo ndlela kugcinwa inqanaba lokoneliseka kwabathengi.
Imisebenzi yokuxhasa okanye yesibini
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ukuze imisebenzi ephambili yenziwe ngokukuko nangokungagungqiyo, ikwaxhaswa yinto ekuthiwa yeyesekethe kwimisebenzi yesekethe yexabiso. Ezi nkqubo zenziwa ngolu hlobo lulandelayo:
Ulungelelwaniso lwezixhoboYenziwe yiyo yonke le misebenzi ibonelela ngozinzo kwaye igcina ukusebenza okungundoqo kwayo nayiphi na inkampani, oko kukuthi, imisebenzi enjengokucwangcisa, ukubalwa kwemali, ulawulo kunye nemali.
Ulawulo lwabasebenzi: Njengoko igama layo libonisa, lo msebenzi wenkxaso unento yokwenza nolondolozo nolondolozo lwabasebenzi, oko kukuthi, kubandakanya ukukhangela, ukuqesha kunye nenkuthazo yabasebenzi abasebenza kwinkampani. Kubalulekile ukuba uyithathele ingqalelo le nto, kuba abasebenzi kwinkampani lolunye lwezona zinto zisisiseko kwaye ezinokuthi zichaze impumelelo yexesha elide.
Uphuhliso lobuchwephesha, uphando kunye nophuhliso: Ukuze yonke inkampani iqhubeke nokusebenza ngobona bukhulu kwaye inike ezona mveliso zintle kunye nezona zintsha kubo bonke abathengi bayo, uphuhliso lobuchwephesha lubalulekile ukuhlala kwindawo ephambili kuluhlu lweemveliso kunye / okanye iinkonzo ezinikezelayo, ekugqibeleni, ziya kuthi soloko ikunika umfanekiso osemgangathweni onokuhlala uzahlula kubakhuphiswano bakho.
Ukuthenga: Le nto inento yokwenza nokukwazi ukwenza ezona zinto zithengwayo ezifanelekileyo neziluncedo kwinkampani. Eyona nto ibalulekileyo, imalunga nendlela yokulawula iinkqubo zokuthenga oomatshini, izinto, intengiso yokwazisa inkampani okanye iinkonzo ezisetyenziselwa ukugcina isimilo sabasebenzi bayo, kunye nokusebenza kwayo ngokugqibeleleyo.
Iingcebiso zokusebenzisa ngempumelelo ikhonkco lamaxabiso
IBhunga le1: Kuba ikhonkco lexabiso lombutho weshishini kufuneka libonakalise izicwangciso ezenziweyo zeshishini, xa uthatha isigqibo ngendlela yokuphucula ixabiso elithethiweyo, kufuneka icace malunga neempawu ezintle ezizahlula okhuphisana nabo, okanye kwelinye icala, ungakhuthaza ixabiso eliphantsi.
IBhunga le2: Xa ujongene noluhlu olukhulu lotshintsho ekufuneka ulwenzile ekuphuculeni inkampani, kubaluleke kakhulu ukuba ubeke phambili kwaye ugxile kolo tshintsho lolona luya kuba nefuthe elihle kumthengi.
IBhunga le3: Kuyacetyiswa ukuba ujonge kwinto nganye eyenza ikhonkco lexabiso ngokweenkcukacha, kokubini ekumiseni imisebenzi yabo ephambili kunye nemisebenzi yenkxaso. Ngale ndlela, unokufumana izinto ezinokusebenza kakubi kwaye ezinokubakho ngokubanzi ekuphuculeni, eziya kuthi ekugqibeleni zigqibe ukonyusa inzuzo yokukhuphisana kuyo yonke inkampani.
IBhunga le4: Ityathanga lexabiso limiselwa ikakhulu kuhlalutyo lwangaphakathi lwenkampani, ekucetyiswa ukuba isebenze ngokukuko, ukuqhuba izifundo kwiimeko zangaphandle ezinokuthi zichaphazele ixabiso kunye nokhuphiswano lweshishini.
Njengoko kubonisiwe kweli nqaku, ulwazi lwekhonkco elinokubaluleka kunokuba luncedo kakhulu ekunyuseni ixabiso elongeziweyo kunye nokhuphiswano kwishishini. Ukuthatha le datha kuthathelwa ingqalelo, izigqibo ezingcono zinokwenziwa ukwenza naliphi na inyathelo elijolise ekumiselweni kuphela, kodwa nasekugcinweni nasekuphuhlisweni kwalo naluphi na uhlobo lweshishini okanye lwenkampani. Ngesi sizathu, kubaluleke kakhulu ukuqonda nokusebenza ngokufanelekileyo kwikhonkco lamaxabiso kuwo onke amaphulo ohlobo lweshishini, njengoko iya kuba sisiseko apho uzinzo lwenkampani yethu okanye lweshishini luya kuqhubeka khona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Lithini icebo lesixokelelwano sexabiso?
Ipremiyamu yokunkcenkceshela iluchaphazela njani utyalomali?